हाम्रो पाठकको लागि सूत्र :यो लेख सबै भन्दा पहिला सेप्टेम्बर २००६ मा प्रकाशित भएको थियो । अप्रिल २०१७ मा यो लेख संशोधित गरिएको छ । किन कि विश्व युद्धको रुप अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ, महत्वपूर्ण घटनाहरुका समयकाल बदलिएका छन् । विस्तृत जानकारीको लागि कृपया ‘तेस्रो विश्व युद्ध रोक्न सकिन्छ?’ यो खण्ड पढ्नुहोस् ।
लेख सत्व, रज अनि तम – सृष्टिको तीन मूलभूत तत्व पनि पढ्नुहोस्, यो लेखले केही आधारभूत अवधारणाहरु प्रदान गर्दछ जसले गर्दा अहिलेको लेख बुझ्न मद्दत हुन्छ ।
साथै हाम्रो सुझाव छ कि तपार्इ लेख ‘तेस्रो विश्व युद्ध जीवन रक्षा मार्गदर्शन पढ्नुहोस् ।
१. तृतीय (तेस्रो) विश्व युद्धको भविष्यवाणिको परिचय
२. तृतीय विश्व युद्धको भविष्यवाणि अनि सूक्ष्म युद्ध
३. तृतीय विश्वयुद्धको तीव्रताको भविष्यवाणी
४. तृतीय विश्व युद्धको मुख्य चरणहरु अनि सुक्ष्म युद्ध :
४.१ तृतीय विश्व युद्धको भविष्यवाणी – तृतिय विश्व युद्धमा कस्को हात छ अनि के ले गर्दा हुन्छ ?
४.२ तृतीय विश्वयुद्धमा भारतको भूमिका
५. के तेस्रो विश्व युद्ध रोक्न सकिन्छ ?
६. कुन राम्रो शक्तिहरु यस सुक्ष्म युद्ध लड्दछन् ?
SSRF सूक्ष्म-विश्व अथवा सूक्ष्म आयाम शब्दलार्इ त्यस विश्वको रूपमा परिभाषित गर्दछ कि जुन पञ्च-ज्ञानेन्द्रिय, मन अनि बुद्धिभन्दा परे छ । सूक्ष्म-विश्व देवदूत, भूत, स्वर्ग इत्यादि अदृश्य विश्वसँग सम्बन्धित छ, जसलार्इ केवल छैटौं इन्द्रियको माध्यमबाट नै अनुभव गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो केही वर्षदेखि विश्व प्राकृतिक आपदा, आतंककारी गतिविधि, युद्ध अनि राजनीतिक उथल-पुथलमा वृद्धि भइरहेको प्रवृत्तिको सामना गरिरहेको छ । यो प्रवृत्ति घट्ने अथवा यसको गतिमा कमी हुने कुनै लक्षण छैन । हामी मध्ये अधिकांश व्यक्तिहरु विश्व अनियन्त्रित गतिले अझै कठिन काल तर्फ बढिरहेको देख्दा असहाय अनुभव गर्न सक्छन् । अनेक द्रष्टाहरु जस्तै नोस्ट्राडमस, एडगर केसि आदि. ले अशान्त अनि दुखदायक कालमा प्रलय वृद्धिको भविष्यवाणी गरेका छन् ।
एसएसअरएफ ले यी भयावह प्रवृत्तिहरुका लागि कारणभूत सूक्ष्म आयाममा घट्ने घट्नाहरु अनि भविष्यमा हाम्रो लागि के छन्, पत्ता लगाउनको लागि आध्यात्मिक अनुसन्धान गरेको छ । यस लेखको उद्देश्य, आध्यात्मिक अनुसन्धान को माध्यमबाट प्राप्त जानकारी उपलब्ध गराउनु हो –
आध्यात्मिक शक्तिहरु जुन विश्वव्यापि रुपमा तृतीय विश्व युद्ध अनि बढ्दो प्राकृतिक प्रकोपहरुमा कार्य गरिरहेका छन् |
यी घटनाहरुको प्रभाव अल्प गर्नको लागि मानवजाति द्वारा गर्न सकिने उपायहरु ।
अधिकांश मानिसहरु अज्ञात छन्, ब्रह्माण्ड अत्यन्त व्यापक स्तरमा भइरहेको सूक्ष्म युद्धको बीचमा खडा छ । यस युद्धको अधिकांश भाग सूक्ष्म आयाममा राम्रो शक्ति अनि अनिष्ट शक्ति बिच लडिने छ । यस युद्धमा भैतिक आयाम अर्थात् पृथ्वी पनि सूक्ष्म आयामको यस घटकबाट प्रभावित हुनेछ । सूक्ष्म-युद्धको नतिजा विश्वमा बिउ स्वरुपमा, हरेक स्तरमा तीव्र अनि प्रगतिशील गिरावट हुनेछ । यो दुर्इ तरीकाले काम गर्दछ :
यसले विश्वको मसग्र सात्त्विकता घटाउछ
यसले मानवजातिमा अनिष्ट शक्तिको पकड बलियो बनाउछ
१९९३ देखि सूक्ष्म अनिष्ट शक्तिहरु (अधिक शक्तिशाली अनिष्ट शक्ति) समाजको अधोगति अनि अधर्मको बीउ रोप्न थाले । थुप्रै तरीकाहरुले समाजमा अधोगतिको प्रक्रिया बसिसकेका छन् (उदाहरण रजतममा वृद्धि) । यसको कारण हो मानवमा भैतिकवादी प्रकृतिमा बृद्धि, धार्मिकतामा कमी जसले गर्दा आध्यात्मिक अभ्यास कम भयो । उच्च नकरात्मक शक्तिको सहायता द्वारा समाजको अधोगतिको तीव्रता र गति बढेको छ । केही समय पछि यो बिउले जराको रुप लिएर समाजमा रजतम बढाउछ । जसरी समाज ज्यादा भन्दा ज्यादा अधर्मी बन्छ, अनिष्ट शक्तिको हातबाट चल्न थाल्छ अनि वातावरणमा अनिष्ट शक्ति बढाउछ । बढ्दो रजतम मानव एवं वातावरणमा अस्थिर प्रभाव पार्दछ । यस्तो वर्तमान प्रवृत्तिको नतिजा प्राकृतिक आपदा एवं तेस्रो विश्व युद्धमा हुनेछ ।
तलको तालिकामा केही सयन्त्रहरुका उदाहरण उल्लेख गरेका छन् जुन सूक्ष्म स्तरको शक्तिशाली अनिष्ट शक्तिहरुबाट गतिशील भइसकेका छन् । २०१५ देखि भविष्यमा हुने घटनाहरुका प्राथमिक दिशानिर्देशन प्रस्तुत गरेको छ । तेस्रो विश्व युद्ध अन्तिम चरणमा पुगिसकेको हुनाले, घटनाहरुको समय भाग ६ – के विश्व युद्ध रोक्न सकिन्छ ? मा दिएका विभिन्न कारणहरुले परिवर्तन हुन सक्छन् ।
समाजमा प्रबल घरेलू झगडाको बीउ रोपिदिने
समाजमा असामाजिक तत्त्व बढाउने बीउ रोपिदिने
धार्मिक स्थलहरुमा अनाचारमा वृद्धिको बीउ रोपिदिने, जसले रज तम बढाउछ । धार्मिक स्थल समाजमा सत्त्वगुण बढाउछ । जब अधर्माचरण हुन्छ तब सात्त्विकता घट्दछ यस कारण रज तम बढ्न मद्दत हुन्छ ।
धार्मिक स्थलहरुका विनाश प्रारम्भ हुनको लागि बीउ रोपिदिने
अनिष्ट शक्तिहरु द्वारा नियन्त्रित आतंकवादिको माध्यमबाट आध्यात्मिक संस्थाहरुलार्इ नष्ट गर्नाका लागि बीउ रोपिदिने
प्राकृतिक आपदामा वृद्धि
बाढी अनि ज्वालामुखीको प्रलयकारी विनाश
२०१५ – २०१८
मनोवैज्ञानिक स्तरको युद्धमा वृद्धि । रिस अनि अस्थिरता देश भित्र अनि राष्ट्रहरु बीच बढ्नेछन् । यसमा विभिन्न राष्ट्रहरु सैन्य शक्ति प्रदर्शन गर्न अथवा सुरु गर्नका लागि धम्कीहरु समावेश हुन्छन् ।
सानो युद्ध पनि लडिने छ ।
प्राकृतिक प्रकोपमा वृद्धि
२०१९ – २०२३
मानोवैज्ञानिक तहको युद्धमा वृद्धि हुदै जादा वास्तविक युद्ध स्थूल स्तरमा तेस्रो विश्व युद्ध हुने
दृष्ट अनि समाज विरोधी सामाजिक तत्व भौतिक, मनोवैज्ञानिक अनि आध्यात्मिक स्तरमा निर्मूल हुने ।
दोस्रो विश्व युद्धमा लगभग ३० राष्ट्रहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष युद्धमा संलग्न थिए, तेस्रो विश्व युद्धमा विश्वको ५०% राष्ट्रहरु संलग्न हुनेछन् ।
अन्तिम चरणमा जब कुनै राष्ट्रहरु पूर्ण हार तर्फ जान्छन् ती राष्ट्रहरुले आणविक हतियारको साहारा लिनेछन् । आणविक हतियार प्रयोग गरेपछि व्यापक विनाशसँगै युद्ध केही हप्ता भित्र अन्त हुनेछ ।
लगभग आधा संसारको जनसंख्या नष्ट हुनेछ ।
मानिसहरु राजनीतिज्ञ विश्वास गुमाउछन् अनि आफ्ना उद्धार र निर्देशनका लागि सन्तको मार्गदर्शन लिनेछन् ।
वातावरण राम्रो हुदै जाने साथै र्इश्वरी राज्यको पृथ्विमा सुरुवात हुने । त्यसलार्इ र्इश्वरी राज्य भन्ने छ जहाँ समग्र सात्विक्तामा वृद्धि हुनेछ अनि विश्व भरी फेरी अध्यात्म फैलिने छ ।
वातावरणमा सात्विकता बढ्दै जानाले मौसम सामान्य हुने ।
र्इश्वरीय राज्यको प्रशासन सिक्ने ।
यो युद्धको प्रभाव ३० वर्षसम्म हुनेछ अनि धरतीमा जीवनको पुनर्निर्माण १०० वर्ष लाग्ने छ ।
खण्ड के तेस्रो विश्व युद्ध रोक्न सकिन्छ ? पढ्नुहोस्
पहिला भनेको जस्तै, भौतिक आयाममा युद्ध अर्थात् पृथ्वीमा भर्इरहेको यस युद्ध अधिकांश सूक्ष्म आयाममा भर्इरहेका घटनाहरुका कारण हुन् । त्यसैले युद्धको मूल कारणको जानकारी सीमित व्यक्तिहरुलार्इ मात्र छन् जसका आध्यात्मिक स्तरमा छैटौं इन्द्रिय विकसित भएका छन् । वास्तवमा युद्धको एउटा सानो अंश मात्र पृथ्वीको भैतिक स्तरमा अनुभव हुनेछ । तर यो सानो अंश पनि अत्यन्त प्रलयकारि हुनेछ जसले सामूहिक विनाश गर्नेछ । मानवजाती यस युद्धको सानो अंशको अनुभव प्राकृतिक प्रकोप तथा तेस्रो विश्व युद्धमा गर्नेछ, जहाँ सामूहिक विनाशको लागि हतियार साथै आणविक हतियारको प्रयोग गरिने छ । प्राकृतिक प्रकोपमा वृद्धि जस्तै बाढी, भूकम्प, ज्वालामुखि आध्यात्मिक अशुद्धताले गर्दा हुन्छ जुन अधर्मको कारणले हुन्छ । यसको आध्यात्मिक अनुसन्धान लेख प्राकृतिक प्रकोप – एक अध्यात्मिक दृष्टिकोण मा प्रस्तुत गरेको छ । व्यक्ति तथा घटना जुन तेस्रो विश्व युद्धको चपेटामा पर्नेछन् उनीहरु उच्च स्तरीय अनिष्ट शक्ति, मान्त्रिकको नियन्त्रणमा हुन्छन् ।
निम्न तालिकामा विभिन्न विश्व युद्धहरु बिचको तीव्रताको तुलना, सूक्ष्म अनि भौतिक स्तरमा ध्यान राखि गरिएको छ ।
स्थूल एवं सूक्ष्म युद्धको तीव्रता
प्रथम विश्व युद्ध १९१४-१९१८ १
द्वितीय विश्व युद्ध १९३९-१९४५ १.५
टिप्पणी : तेस्रो विश्व युद्धको अन्तिममा युद्धको विनाशको तीव्रता पहिलो विश्व युद्ध भन्दा ४.५ गुणा अधिक तथा दोस्रो विश्व युद्ध भन्दा ३ गुणा अधिक हुनेछ ।
माथिको तालिका एउटा सूक्ष्म्-लडार्इ अनि तेस्रो विश्व युद्धको पैमानको जानकारी दिन्छ । सबै प्रमुख प्रकोप र पछिल्लो केही वर्षका आतंककारी गतिविधिहरु सूक्ष्म-युद्धसँग सीधै सम्बन्धित सङ्केतहरु हुन् । उच्च स्तरीय सूक्ष्म-मान्त्रिक जुन व्यक्तिको मानसिकता समाजलार्इ हानि पुराउने हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिलार्इ नियन्त्रणमा राखि मानव जातीमा आतंककारी गतिविधिहरु गराउछन् ।
तेस्रो विश्व युद्ध मुख्य रुपले धार्मिक कट्टरताको कारणले शरु हुन्छ । उच्च स्तरीय नकारात्मक ऊर्जा व्यक्तिमा भएको कमजोरी उपयोग गराउनको लागि व्यक्तिलार्इ अन्तिम किनारासम्म धकेली दिन्छ अनि एक अर्कासँग युद्ध गर्नको लागि देशहरुलार्इ उकसाउछ । सबै तीन विश्व युद्धहरु (विश्व युद्ध १ देखि विश्व युद्ध ३) शक्तिशाली अनिष्ट शक्ति क्रमिक रुपमा तल्लो स्तरको नरक; घटनाहरुका वास्तविक मूल कारण रहेका छन्, जसले देशहरुलार्इ एक-अर्कासँग युद्ध गर्नको लागि उकसाउछन् । निम्नलिखित मुद्दा वृस्तित रुपमा जानकारी दिन्छ, विश्व युद्धको लागि कुन सुक्ष्म अनिष्ट शक्तिहरु नरकबाट जिम्मेवार थिए ।
विश्व युद्ध १ : सूक्ष्म-मान्त्रिक नरकको देस्रो क्षेत्रबाट ।
विश्व युद्ध २ : सूक्ष्म-मान्त्रिक मुख्यतह नरको तेस्रो क्षेत्रबाट देस्रो विश्व युद्धको आयोजना भाग लिए । उदाहरणको लागि हिटलर आफ्नो शासन कालमा पाचैं क्षेत्रको सूक्ष्म-मान्त्रिकबाट नियन्त्रित थियो । यो पनि एउटा कारण हो उनको सत्तामा आकस्मिक वृद्धि हुनु । उनको सम्पूर्ण शासनकाल अवधिमा सूक्ष्म-मान्त्रिक पूर्णतया प्रकट थियो ।
तेस्रो विश्व युद्ध : नरकको चैथो क्षेत्रको सूक्ष्म-मान्त्रिक तेस्रो विश्व युद्धको कारण हुने छ जुन भैतिक स्तरमा पनि देखिनेछ । तर सूक्ष्म युद्धमा नरकको सातै क्षेत्रको सूक्ष्म-मान्त्रिकले भाग लिनेछ । वर्ष २०१७ – २०२३ मा नरकको सातै क्षेत्रबाट सूक्ष्म-मान्त्रिक युद्धमा संलग्न हुनेछ ।
तेस्रो विश्व युद्ध २०१५ देखि शुरु भएर २०२३ सम्म, लगभग ९ वर्षसम्म जारी हुनेछ । यस अवधि भित्र लडिने युद्धहरु एक अर्कासँग जोडिने छन् । तर संसारको लागि यो स्पष्ट हुदैन । यस अवधिको अन्ततिर, आणविक हतियार सहित आम विनाशको लागि हतियार प्रयोग गरिनेछ । यहाँ पहिला कहिल्यै पनि नभएको जीवनको अभूतपूर्व हानि हुनेछ, लगभग ५०% जनसंख्या नष्ट हुनेछ । कुनै देशहरु अरु देशको तुलनामा अधिक प्रभावित हुनेछन् । भन्न आवश्यक छैन, अत्यधिक-परस्पर संसारमा, सबै देशहरु प्रभावित हुनेछन् ।
निम्नलिखित तेस्रो विश्व युद्धको समय तालिका एवं राम्रो अनि अनिष्ट शक्तिको परिप्रक्ष्यबाट ‘र्इश्वरीय राज्य’ स्थापनाको लागि हो ।
तृतीय विश्वयुद्धको चरण
२०१६-२०१८ दुर्जन शक्तिहरुको प्रभावमा अधर्मी व्यक्ति विजय हुने
२०१९-२०२१ धर्म अनि अधर्मको शक्ति बराबर हुने
२०२२-२०२३ राम्रो शक्ति अन्तर्गत धर्मिक मान्छेको बढ्दो विजय हुने
२०२४ देखि आगाडि ईश्वरीय राज्यको स्थापना
आदिकाल देखि नै भारत विश्वको अध्यात्म केन्द्र भएको छ । आध्यात्मिक अनुसन्धानबाट ज्ञात भएको छ कि आउने युद्धमा आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्यबाट भारतको केन्द्रीय भूमिका हुनेछ । भारतमा रहेको सर्वोच्च स्तरका सन्तहरु विश्वमा सत्व घटक बढाउनको लागि हरेक प्रयास गरिरहेका छन् जसले तेस्रो विश्व युद्धको तीव्रता कम हुन सक्नेछ । भारतको महत्वपूर्ण भूमिका अस्थिर गराउनको लागि यद्धको समय नकारात्मक सूक्ष्म शक्ति छिमेकी देशहरुलार्इ भारत माथि हमला गर्नको लागि प्रेरित गर्दछ । यसको परिणामस्वरुप भारतको लगभग ५०% जनसंख्या नष्ट हुन जान्छ ।
यो प्रश्नको छोटो जवाफ हो ‘सकिदैन’, फेरि पनि तेस्रो विश्व युद्धको समय तथा प्राकृतिक प्रकोपको तीव्रता फरक हुन सक्छन् ।
सर्वप्रथम यो जानै कि किन यी विपत्तिजनक घटनाहरु टालन सकिदैन्न् । पछिल्लो केही दशक देखि आध्यात्मिक अशुद्धता एकदमै वृद्धि भएको छ । यो धेरै कारणहरुले भएका हुन् जस्तै मानवको व्यक्तित्वमा स्वाभावदोषको तीव्र वृद्धि, भौतिकतामा ध्यान केन्द्रित, आध्यात्मिक अभ्यासमा कमी (सर्वभैमिक आध्यात्मिक सिद्धान्त अनुसार) र आध्यात्मिक आयामको नकारात्मक शक्ति व्यक्तिलार्इ प्राभावित तथा नियन्त्रणमा राखि व्यक्तिलार्इ उनको इच्छाहरु अनुसार कार्य गराउने । जति बेला आध्यात्मिक अशुद्धता (रज तथा तम) पृथ्विमा वृद्धि हुन्छ तब मानवमा अनि वातावरणमा अस्थिरता बढ्दै जान्छन् । यसको परिणामस्वरुप नराम्रो घटना जस्तै प्राकृतिक प्रकोप, आतंकवाद, युद्ध आदि हुन्छन् । यो एउटा स्वचालित सफार्इ प्रक्रिया जस्तै हो जुन आफै गतिमा स्थापित हुन जान्छ जसको परिणाम रजतम व्यक्तिको विनाश हुन्छ । यो प्रवृत्तिलार्इ बदलनको लागि तथा यो विनाशबाट बाच्नको लागि एकमात्र तरीका हो संसारमा सत्व घटक बढाउनु अनि सूक्ष्म रजतम घटक कम गर्ने । यो हुनको लागि मानवजातिले आफ्नो वर्तमान जीवनशैलीमा १८० डिग्री परिवर्तन ल्याउनुपर्छ साथै आध्यात्मको ६ मूलभूत सिद्धान्त अनुसार साधना गर्नुपर्छ । आध्यात्मिक प्रगति केवल सम्भव हुन्छ जब आध्यात्मिक अभ्यास आध्यात्मको ६ मूलभूत सिद्धान्त अनुसार गर्दछ । जो धर्मको प्रचार गर्छ, भगवानको लागि एउटा मात्र बाटो छ अनि अरुलार्इ जबरजस्ती अथवा पैसा दिएर आफ्नो विश्वासमा परिवर्तित गर्ने प्रयास गर्छ, त्यसले आध्यात्मको ६ मूलभूत सिद्धान्तलार्इ उल्लङ्घन गर्ने जोखिममा हुन्छ, यसले गर्दा जो व्यक्ति त्यस्तो आध्यात्मिक अभ्यास गर्दछ उनको आध्यात्मिक अभ्यास निष्फल हुन्छ । कुनै अवस्थाहरुमा जहाँ धर्म समाजमा हिंसाको प्रचार गर्छ अनि व्यक्तिहरु त्यस सिद्धान्तलार्इ अभ्यास गर्दछन्, उनीहरुका आध्यात्मिक अधोगति हुनेछन् अनि अत्यन्त नकरात्मक भाग्य सृजना गर्नेछन् । यस्तो १८० डिग्रीको परिवर्तनको सम्भावना शून्य समान हुनेछ त्यसैले भविष्यवाणी गरिएका विनाशहरु अनिवार्य हुन जान्छन् ।
तर घटनाहरुका तीव्रता र समय परिवर्तन हुन सक्छन् ।
संसार यस्तो विपत्तिजनक घटनातर्फ नजिक हुदै जादा, धरतीमा रहेका उच्चतम स्तरका सन्तहरु मानवजातीलार्इ सुरक्षित राख्न सबै प्रयासहरु गरिरहेका छन् । ज्यादा भन्दा ज्यादा मानिसहरु साधना शुरु गर्नेछन् जसमा साधक बन्ने छमता छन् । उच्चतम स्तरका सन्तहरु उनीहरुका संकल्पनाले युद्धको समय पछाडि धकाली रहेकाछन् जसले गर्दा साधकहरुलार्इ आफ्ना साधना सुरु गरि बलियो बनाउनको लागि प्रयाप्त समय मिल्नेछन् ।
समय अनि तीव्रता प्रयासको आधारमा निरभर हुनेछ, यदि अनिष्ट शक्ति ज्यादा प्रयास गरिरहेका छन् भने तीव्रता ज्यादा हुनेछ, यसको विपरीत यदि धेरै मानिसहरुले आध्यात्मिक अभ्यास सुरु गरेका छन् भने तीव्रता कम हुन सकिन्छ ।
परम पूज्य डा. आठवले ज्यूको शब्दमा, “साधकको भगवान प्रति भक्तिको आधारमा भक्त (धार्मिकता) अनि राक्षसी शक्ति (अधर्मि) बिचको युद्धको समय चरण परिवर्तन हुन सक्छ । मानव जातिको भाग्य आध्यात्मिक अभ्यासले, राम्रोको लागि परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।”
व्यक्तिगत स्तरमा ती व्यक्तिहरु जस्का आध्यात्मिक स्तर ५०% माथि छन् अथवा आध्यात्मिक प्रगति गर्ने छमता छन् उनीहरु तेस्रो विश्व युद्धबाट बाच्नेछन् ।
सूक्ष्म युद्ध १९९९-२०२३ सम्म लडिने छ । राम्रो अनि अनिष्ट शक्तिको आगामी लडार्इमा पृथ्वीमा रहेको राम्रो शक्तिको नेतृत्व परातपर गुरु (९०% भन्दा माथि आध्यात्मिक स्तर भएका आध्यात्मिक मार्गदर्शक) द्वारा गरिने छ । युद्धको शुरुआतमा केवल परात्पर गुरु अनि केही साधकहरुले युद्ध लडे । जसरी-जसरी समय अगाडि बढि रहेको छ, अझ धेरै सन्तहरु तथा साधकहरु युद्धमा प्रवेश गर्नेछन् । ब्रह्माण्डको उच्च सकारात्मक क्षेत्रबाट उच्च आध्यात्मिक स्तर भएका सूक्ष्म देह पनि यस युद्धमा अनिष्ट शक्तिलार्इ प्रराज्य गर्नको लागि सामिलित हुनेछन् ।
हामी यो युगको परिवर्तन बीचको महत्तवपूर्ण क्षणमा छौं । यो लेख समाजलार्इ अलार्म (alarm) गर्ने उद्देश्यले प्रकाशित गरिएको होइन तर सचेत र सावधानी अपनाउनको लागि गरिएको हो । जो आध्यात्मतर्फ प्रवृत्त छन् र जो साधक (भगवानको) हुन् उनीहरुलार्इ आग्रह छन् यो लेख बुझ्नको लागि समय लिनुहोस् अनि आध्यात्मिक अभ्यास बलियो बनाउनुहोस् । यो युग आध्यात्मिक प्रगतिको लागि धेरै लाभदायी छ जुन लेख राम्रो अनि नराम्रो मा सविस्तार रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । तीव्र आध्यात्मिक अभ्यासले, साधकहरुमा तेस्रो विश्व युद्धको तीव्रता कम गर्ने शक्ति हुनुका साथै स्वयंलार्इ जोगाउन सक्छन् । जसरी विदेश भ्रमण गर्नको लागि भिसाको (visa) आवश्यकता हुन्छ त्यसरीनै र्इश्वरीय राज्यमा बास गर्नको लागि स्वीकृती प्राप्त गर्नको लागि आध्यात्मिक प्रगति गर्ने छमतामा निर्धारित हुन्छ । भगवानलार्इ यो व्यक्ति सुरक्षित राख्न लायक छ भने महसुस गराउनुपर्छ, यो सम्भव तब हुन्छ जब व्यक्ति आध्यात्मिक अभ्यास गरि साधक बन्ने छमता दर्शाउछ ।
अन्तमा यो युद्ध एक देशले अर्को देशलार्इ पराजित गरि आफ्नो जीवनको बाटो संरक्षण गर्ने होइन । यो कुनै पनि स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्र अथवा परिचालित शासनको बारे होइन । यो राम्रो अनि नराम्रो बिचको युद्ध हो, यो आध्यात्मिक शुद्धता तथा आध्यात्मिक अशुद्धता बिचको लडार्इ हो । यो युद्ध आध्यात्मिक स्वरुपको हुन्छ यसले विश्वको आध्यात्मिक सुद्धिकारण गर्छ, त्यसैले जोसँग उच्च सत्व घटक छ उनलार्इ बचाइन्छ ।
जब केही गलत हुन्छ अथवा जब मर्न लाग्छ तब भगवानलार्इ सम्झिन्छ । त्यस क्षणमा ज्यादा गरेर मानिस भन्छ ‘हे भगवान’ ।
अर्कोतर्फ तपार्इ भगवानलार्इ अहिलेदेखि नै सम्झिरहनुहोस् (विश्व युद्ध अधि) अनि आध्यात्मिक अभ्यास गर्नुहोस्, जब युद्ध सुरु हुन्छ भगवाले तपार्इलार्इ सम्झिने छ अनि तपार्इको जीवन सुरक्षित राख्नेछ । तब तपार्इले ‘हे भगवान’ भन्न आवश्यक पर्दैन । जब यस्तो हुन्छ तब भगवानलार्इ केवल ‘धन्यवाद भगवान’ भन्नुको सट्टा, भगवानलार्इ कृतज्ञता व्यक्त गर्नको लागि सम्झनुहोस् ।
परम पूज्य डा. आठवले